လက်ရှိရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ဇာခါ | Football Myanmar
လက်ရှိရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ဇာခါ
November 18, 2018 Adam Willian	12 Comments
အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ဂရန်းနစ်ဇာခါဟာ လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာ ပုံစံကောင်းတွေ ပြသနေပြီး သူ့အနေနဲ့လည်းလက်ရှိရာသီဟာ ကစားသမားဘဝသက်တမ်းတစ်လျှောက် အကောင်းဆုံးပုံစံရရှိနေတယ်လို့ ယုံကြည်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဇာခါဟာ အာဆင်နယ်ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ်မှာ ပေါင်သန်း (၄၀) နဲ့ ဘွန်ဒက်လီဂါကလပ် မိုချန်ဂလာဘတ်ကနေ ရောက်ရှိလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။ဇာခါဟာ သူ့ရဲ့ ပထမဦးဆုံး ဘောလုံးရာသီနှစ်ခုမှာ ခြေစွမ်းကောင်းတွေ ပြသနိုင်ဖို့ အနည်းငယ်ရုန်းကန်ခဲ့ရပေမယ့်လည်း အာဆင်နယ်ရဲ့ ကွင်းလယ်ခံစစ်တန်းမှာတော့ သူ့ရဲ့ မာန်ပါပါကစားဟန်အချို့ကို တစ်ခါတစ်လေမြင်တွေ့ရလေ့ ရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း လက်ရှိဘောလုံးရာသီမှာတော့ ဇာခါဟာ ကွင်းလယ်မှာ အသစ်ရောက်ရှိလာတဲ့ ကွင်းလယ်လူ တော်ရဲရားနဲ့ အတူ အထင်ကြီးဖွယ်ရာ ခြေစွမ်းတွေကို ပြသနေပါတယ်။
ခြေစွမ်းကောင်းပြသနေတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားရာမှာတော့ ဇာခါက “လက်ရှိရာသီဟာကျွန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးသောရာသီပါပဲ၊ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ နောက်တစ်ဆင့်ကို ရောက်ရှိလာပြီဆိုတာ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိပါဘူး၊ ဒီအချိန်ဟာ အသင်းကို ကျွန်တော်စရောက်ခဲ့တဲ့ အချိန်ကစလို့ အကောင်းဆုံးလို့ ခံစားရတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါတယ်၊ဒီအတွက် အသင်းရဲ့ နည်းပြဟာ အများကြီးလွှမ်းမိုးမှု ရှိပါတယ်၊ သူဟာ ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် အစီအစဉ်တစ်ခု သတ်မှတ်ပေးပါတယ်၊ ကျွန်တော်တို့ဟာ ဘောလုံးရှိရှိ မရှိရှိဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာကို သိလာပါတယ်၊ နေရာယူတာက အစပေါ့၊ အမ်မရီဟာလူစီယန် ဖာဘရီ (ဂလာဘတ်နည်းပြဟောင်း – ယခုဒေါ့မွန်နည်းပြ) နဲ့တူပါတယ်၊ ကစားသမားတိုင်း နားမလည်မချင်း (၁၀) ကြိမ်မက လေ့ကျင့်စေတဲ့ နည်းပြဖြစ်ပါတယ်”
“ကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲ မပြီးခင်အထိ ကျွန်တော်သူနဲ့ အဆက်အဆံမရှိခဲပါဘူး၊ ကျွန်တော် အာဆင်နယ်ကို လေ့ကျင့်ခန်းဆင်းဖို့ ပြန်လာတော့ သူကျွန်တော့်ကို ပြောတာက – ဂရန်းနစ်၊ မင်းဟာ ငါ့ရဲ့ အသင်းခေါင်းဆောင် ငါးယောက်ထဲက တစ်ယောက်ပဲတဲ့၊ ကျွန်တော်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ အဆင့် (၁၀) အတွင်းမှာရှိနေတဲ့ ကလပ်မှာ ကစားနေတာပါ၊ အဲဒါကြောင့် သူအဲဒီလိုပြောလိုက်တာဟာ ကျွန်တော့်ကို ဂုဏ်ယူရစေပြီး ယုံကြည်မှုတွေလည်း တိုးပွားလာစေပါတယ်၊ ကျွန်တော့်ကို ၂၀၂၃ အထိ သက်တမ်းတိုးလိုက်တာဟာ အရမ်းကို ကောင်းမွန်ပါတယ်၊ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ တော်တော်လေးကို ကျေနပ်ဖို့ကောင်းတဲ့ စာချုပ်ဖြစ်ပါတယ်၊ ကျွန်တော်ဟာ အသင်းအတွက် အရမ်းကိုအရေးကြီးတယ်ဆိုတာ သိသွားခဲ့တာပေါ့” လို့ ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။
Previous Postနည်းပြ အမ်မရီ အာဆင်နယ် အသင်းကို ဘယ်လို ပြောင်းလဲမှု တွေ ပြုလုပ်ခဲ့သလဲ ဆိုတာကို ဖွင့်ဟ ပြောကြား သွားခဲ့တဲ့ #ယွန်းဘတ်Next Postလက်ရှိအင်္ဂလန်ကြယ်ပွင့်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ထားနိုင်မှုအပေါ်ကစားသမားဟောင်းကြီးအချို့ကတောင်မနာလိုဖြစ်နေရတယ်လို့ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ #ဝိန်းရူးနီ
12 thoughts on “လက်ရှိရာသီမှာ အကောင်းဆုံးပုံစံရနေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို ရှင်းပြသွားခဲ့တဲ့ အာဆင်နယ်ကွင်းလယ်လူ ဇာခါ”
ASMX Review says:
This is our high four best warmth press machine picks.
✅ DATING SITES ❤ http://sexinyourcity.ml ☏
DATING WEBSITES https://you-porn-real-passionate.blogspot.com
Porn GIF Magazine – XXX GIFs.
edwardhpnk.x.fc2.com But when you are in the New York City, there are lots of options before you.
What’s up friends, its impressive post on the topic of educationand completely explained, keep it up all the time.
I’m now not positive where you are getting your information, but good topic. I must spend some time finding out much more or figuring out more. Thank you for wonderful info I was searching for this information for my mission.
You’re so cool! I do not suppose I’ve truly read through something like that before. So nice to find another person withafew original thoughts on this subject matter. Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is required on the web, someone with some originality!
Search the Internet for the right online dating website thats right for you. With the proper understanding of these ladies, one can set up escort blog, startasport or research which will be fully participated by the right targets of the female gender. This is an perspective I have encountered repeatedly when I’m teaching Singles. ) http://europeanpornstarsescort.cryptom.site
Welcome All Fan
Football Myanmar – LIVE SCORE
Powered by Football Myanmar